10 Qodob Oo Aad Ku Kasban Karto Jaceylka Ubadkaaga - Daryeel Magazine
10 Qodob Oo Aad Ku Kasban Karto Jaceylka Ubadkaaga
Waxaa jirta in la yiraahdo qofkas waa caasi waalid micnaha ma xushmeyo sificama ulama dhaqmo labadi dhashay ama midkod badana aabaha. Taasi waxa ay sabab u noqon kartaa in u xumado xiriirki ka dhaxeyay walidka iyo wuxu dhalay laakiin Somali hadaynu nahay waxaan mar walba dusha ka saarna ubadka la dhalay in ay iyagu xunyihiin. Dib u raacid hadi la sameyo waxa so baxayso in sababta kentay in ubadku caasi noqdo waalidku u leyahay oo waxan oran karnaa tarbiyentisii ayaa wax badan ka maqnayeen ( ilmo jaceel laguso koriyay udugaadka kastaye) oo u ugu horeyo jacel wiil iyo waalid dhex mara. Hadaba hadii aad sameyso tobankaan waxyaabood waxad kasban doonta mustaqbalka nolol farxadleh insha Allah.
5) U ogoloow ubadkaagu in ay ku caawiyan howlaha guriga una magacaaw xil sida in uu hayo lacagaha waayo waxa uu baranayaa masuuliyad waxaana uu isku arkayaa xilkas. Marka aad suuqa ka timaado adeega i aruuri dheh marka aad dhar labisato weydii in aay ka helen sida u layahay labiskaaga. Ii toosi dheh dharka. Waxa aad ka dhaxle kalsoni dhexdiina ah. marka aad talo u bahantahay weydii si ficana u dhageyso taladooda in aad u bahantahayna u muuji caawinaadoda,
10 Tallaabo Oo Aad Ku Kasban Karto Asxaab Badan Oo Wanaagsan 12 Qodob Oo Aad Ku Dhisi Karto Tarbiyada Caruurtaada 10 Xeeladood Oo Aad Dareenka Qofka Ku Kasban Kartid Kulanka Koobaad Baro Qaababka Aad Lacagta Kusoo Gasha Wax Uga Dhigan Karto, Kharashkaagana Si Caqli Ku Dhisan U Xakamayn Karto